ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: September 2010
၁ ။ ဘ၀တစ်ကွေ့ဆုံတွေ့ကြရတဲ့သူတွေကို ကောင်းသောတွေ့ဆုံခြင်း ကောင်းသောခွဲခွာခြင်း တွေနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ တစ်ချိန်ချိန်ကျ ကိုယ့်ဘ၀အမှတ်တရတွေမှာ လှပတဲ့ အတိတ်နေ့ရက်တွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ။
၂။ ဘာအကျိုးမှ မမျှော်ကိုးပဲ ကူညီပေးလိုက်တဲ့နောက်မှာ “ ကျေးဇူး” ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းမကြားရလည်း ၀မ်းမနည်းပါနဲ့ သူများအကျိုးဆောင် ကိုယ့်အကျိုးပြောင်လို့မပြောမိပါစေနဲ့ တစ်နေ့ စေတနာအကျိုးပြန်ပေးမယ်လို့ ယုံကြည်လိုက်ပါ ။
၃။ တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကမှန်တယ်လို့ထင်ရပေမယ့် ရှု့ထောင့်အမျိုးမျိုးပြန်စဉ်းစားကြည့်မိတဲ့အခါ မှားမှန်းသိရင် ပြန်တောင်းပန်ဖို့ ၀န်မလေးမိပါစေနဲ့
၄။ အချစ် = ပူတတ်သည် မကိုင်ပါနှင့် ( မီးဘေးရှောင်မလောင်ခင်တား)
၅ ။ အမုန်းဆိုတာ မုန်းနေရတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ပူလောင်တာမို့ ဘယ်သူ့ကိုမှမမုန်းမိအောင်ကြိုးစားပါ။
၆။ သူများအကြောင်း ပြောရင်တော့ ပြုံးစိစိနဲ့ တ၀ါးဝါးရယ်ပြီး ကိုယ့်အကြောင်းပြောတဲ့ အခါကျ သွားခိုးမနားထောင်မိစေနဲ့ ကိုယ်ပဲစိတ်ဆင်းရဲတတ်တာမို့။
၇ ။ စေတနာနဲ့ အကြံပေးတဲ့အခါ လေသံအေးအေးနဲ့ပြောပါ စိတ်မပါသလိုလို စိတ်မရှည်သလိုလိုနဲ့ ပြောမိတဲ့အခါ တစ်ခြားသူက ဘယ်လိုထင်မလဲ ကိုယ်တိုင်ဝင်ခံစားကြည့်တော့ စောင့်ကြီးအောင့်ကြီးပြောတယ်လို့ထင်ကော အဲ့တော့ ကိုယ့်စေတနာတွေက သဲထဲရေသွန် ..။
၈။ အသေးအမွှားအကြောင်းရာလေးတွေနဲ့ စိတ်ပျက်အာငယ်နေတတ်ရင် ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိပါသလား ပြန်တွေးပါ ။
၉။ မလုပ်ခင် စဉ်းစားပါ စဉ်းစားပြီး အမှားနည်းအောင်လုပ်ပါ လုပ်ပြီး ဖြစ်ပြီးသမျှတိုင်းကို ပြန်ပြီး နောင်တ မရတတ်အောင်ကြိုးစားပါ ။
၁၀။ ဒေါသရှေ့ထား စကားမဆိုမိပါစေနဲ့ စိတ်ဆိုးစရာကြားရတိုင်း မြင်ရတိုင်း အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူထုတ်လိုက်ပါ ။
၁၁။ ကြား ၃ ကြားရှောင်ပါ ...။
၁၂ ။ အချစ်အကြောင်း မဝေဖန်မိပါစေနဲ့ ဒီတစ်ယောက်က ဒီလောက်ရုပ်ဆိုးတာ ဘယ်လိုများကြိုက်မိပါလိမ့်လို့ ဝေဖန်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်လည်း တစ်နေ့ ကုလားမကြီးနဲ့ မညားနိုင်ဘူးလို့ အာမခံနိုင်သား အချစ်အကြောင်း ဝေဖန်မယ်ကြံတိုင်း ကုလားမကြီးကို မျက်လုံးထဲမြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ ဒါဆို မဝေဖန်ရဲတော့ဘူး ။
၁၃။ ကိုယ့်အပေါ် ကျေးဇူး ရှိဖူးသူများကို ကျေးဇူးလို့ပြောဖို့ ၀န်မလေးမိပါစေနဲ့ အပြောနဲ့တင်မပြီးသွားပဲ တစ်နေ့နေ့ ကျေးဇူးပြန်ဆပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ ။ အခါအခွင့်ကြုံတိုင်းအမှတ်ရပါ ။
P>S = နောက်လည်းရေးဖြစ်အုံးမှာပါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မြင်ယောင်ပြီး ပြစ်ချက်တစ်ချို့ပေါ့ အများကြီးရှိပါသေးတယ် အမှားတွေ လူဆိုတာ အမှားနဲ့တော့ ဘယ်ကင်းနိုင်မလဲလေ နော့် ဟုတ်ဘူးလားဗျာ :)
အမေ ..... အမေလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်လောကကြီးတစ်ခုလုံး လုံခြုံနွေးထွေးသွားသလို ခေါ်လိုက်ရတာ ပါစပ်ထဲအရသာရှိသွားတာပဲ ။ အမေချက်ကျွေးတဲ့ဟင်းဆို ခါးနေပါစေ စားကောင်းမြဲပါ ။ အမေ....မောင်နှမတွေများတော့ အမေက ဒုတိယသမီး ကျောင်းမနေပါ မောင်ညီမတွေကိုထိန်းရင်း ရေးတတ်ဖတ်တတ်ရုံလောက်ပဲ အမေသိတယ် ။ အမေက ဘ၀အသိတွေ လောကဓံရဲ့ ခပ်ပြင်းပြင်းရိုက်ခတ်မှုတွေကို သင်ခန်းစာယူရင် သားသမီးတွေကို အမေက ညအိပ်ယာဝင်ပုံပြင်တွေအဖြစ် အမြဲပြောပြနေကြ။ ညအိပ်ခါနီးတိုင်း ခေါင်းကိုပွတ်သပ်ပေးနေကျ အမေ့လက်ကြမ်းရှရှလေးကိုသတိရတယ် ။ ကျောင်းမနေဖူးတဲ့ အမေ သားသမီးတွေ အားလုံးရဲ့ မွေးနေ့တွေကို အလွတ်ရနေတတ်တာ ဘာကြောင့်ပါလိမ့် အမေ့ရဲ့ အချစ်စွမ်းအားတွေကြောင့်ပေါ့။
“ နင်တို့ဘ လူပျိုတုန်းက အမေ့ကိုဘယ်လိုပိုးတယ်ထင်တုန်း အစ်ကိုတွေ ၊မောင်တွေများတော့ ကြောက်တယ်ထင်ပါ့ အိမ်မှာ မိုးတွင်းစပါးရိတ်ချိန်ပြီးတိုင်း အမေတို့အိမ်မှာ အလကားကျွဲလာကျောင်းပေးတာ ” တဲ့ ပြီးတော့ ထောက်ခံချက်လေးယူလိုက်သေး “ ဟုတ်တယ်မှတ်လား ငပေါ ” တဲ့ အမေက အဘကိုချစ်စနိုးတဲ့ခေါ်တဲ့ နာမည်က ငပေါ ကရင်အမျိုးသား အဘဒီအရွယ်ကြီးရောက်ပေမယ့် ရှက်သွားတယ်ထင်ပါ့ “ နင်တို့မေတို့ဟာလေ ခလေးကုလား သားသမီးတွေ ရှေ့မှာ ” ဆိုပဲ ။ အစ်မအကြီးဆုံးမွေးတုန်းက ဒုက်ခရောက်တဲ့ဘ၀ကို အမေပြန်ပြောပြတိုင်း အမေ့ကို သနားမိတယ် ခလေးကငယ်ငယ် စီးပွားရေး အဆင်မပြေတော့ ခလေးဖျားနေတာကို ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ လသားလေးနဲ့ လူ့လောကထဲက ထွက်သွားရတဲ့ အဖြစ်ပါ။
ကိုကြီးငယ်ငယ်တုန်းက မုန့်စိမ်းပေါင်းသည်ကို နောက်ကနေ တုတ်နဲ့ထိုးချလိုက်လို့ လျှောလိုက်ရတဲ့အကြောင်း ။ အစ်မကတော့ အပျိုပေါက်လေးတုန်းက ဆန်တွေတအားစားလို့ ကြောင်ချီးတွေ လူးထားရတဲ့အကြောင်း မိသားစု စကားဝိုင်းတိုင်း အမေပြောနေကျပါ ။ ခလေးသေးသေးမြင်ရင် ချီလည်းချီချင်တယ် ပျော့စိစိလေး ပြုတ်ကျမှာကြောက်လို့မချီရဲတဲ့ အဖြစ်ကိုတွေ့တော့ အမေက ပြုံးရင်းဆိုတယ် “ နင့်တုန်းက အဲ့ထက်တောင်ဆိုးသေး ခေါင်းကနီတာရဲ အမေ့ရဲ့ နံကပ်သား အဘရဲ့ နောက်ဆုံးကျည်ဆံလေးဆိုတော့ ကြွက်စုတ်လေးလိုပဲ ” တဲ့ အဲ့လိုပြောတိုင်း ရှက်ရှက်နဲ့ ဆိုမိတဲ့ စကားက “အမေကလည်းဗျာ ” ။
ကျနော့်ကိုမွေးတဲ့နေ့က အဖြစ်အပျက်ကို အစ်မက မကြာမကြာပြောရင်းစတယ် တစ်ခုခုဖြစ်တိုင်း နင်ဟာလေး တခါတည်း ရေကပြင်ထဲကျသွားရမှာတဲ့ စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ အမေ့ကိုဂျစ်တိုက်တာ မပြောမဖြစ်တဲ့အမေ မှတ်ညဏ်တွေမပျောက်ပဲ မှတ်မိနေတာပါပဲ ။ အဲ့ဒီနေ့ အမေ့ဗိုက်ထဲကကျနော် ရှုပ်ထွေးပွေလီလွန်းလှတဲ့ လူ့လောကကြီးထဲ တိုးထွက်နေတာပေါ့ ခြံသမားအဘ လှည်းတိုက်ပြန်လာရင်း ပင်ပန်းလာတော့ ရှကီလေးက တစ်လုံးရယ် ၂ လုံးရယ်နဲ့ အလုံးပေါင်းတွေထပ်လို့ တော်ကြာ ကြက်သွန်သုတ်ပေးပါအုံး တော်ကြာ မြေပဲလှော်ပေးပါအုံးနဲ့ အမေ့ကိုရစ်နေတာ ဗိုက်နာလျှက်နဲ့ အမေ့ခမျာ လုပ်ပေးရတုန်း ။ ကြာလာတော့ မအောင့်နိုင်တော့တဲ့ အမေ “ငပေါ ငါဗိုက်အရမ်းနာလာပြီး အမေတို့ကို သွားခေါ်စမ်းပါ” လို့ အမေကပြောတော့ အမူပြေချင်သွားတဲ့ အဘ လှေကားထစ်ဆင်းတာ ပြေချင်ပေမယ့် မပြေတဲ့ အမူးဒဏ်က လှေကားတစ်ထစ်မှာ တစ်ခါ အိပ်ပျော်နေပါကောတဲ့ ဖြစ်ရလေ ချစ်လှစွာသော အဘရယ် ။
၁၀နှစ်သမီး ၀န်းကျင် အစ်မကိုနှိုးပြီး အဖွားတို့ကို သွားခေါ်ခိုင်းတော့ မနက်လင်းကြီး ခလေးပီပီ အစ်မ အဖွားကိုသွားပြောတာက “ အဖွား အဖွား အမေ ခလေးတန်းလန်းကြီးနဲ့ ” တဲ့ သမီးဇောနဲ့ အဖွား အိပ်ယာထလာလိုက်တာ လမ်းတစ်ပိုင်းရောက်မှ အစ်မက နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အဖွားက အောက်ခံလုံချည်မပါဘူးတဲ့ အဖွားတစ်ယောက် တုန်၂ချိ၂ နဲ့ လုံချည်ပြန်ဝတ်ရတဲ့အဖြစ် အဖွားလည်းရောက် အမေက ရေကပြင်မှာ ချက်ကြိုးတန်းလန်းကြီးနဲ့ နီတာရဲ ကျနော့်ကို မွေးထုတ်ထားပြီးပြီး ရှေ့မှာ တိုက်ပွဲ ငါးပွဲတောင်တိုက်ထားဖူးတဲ့ အမေ ဒီတိုက်ပွဲတစ်ပွဲကိုတော့ အပျော့ပေါ့တဲ့ ။ မွေးကတည်းက ခပ်လွဲလွဲကျနော် ကျနော်မွေးတဲ့နေ့က အဖွားလုံချည်မပါပဲ မနက်အစောကြီး လမ်းထွက်လာတဲ့နေ့ အဘ မူးတဲ့နေ့ ၊ ညီမဇောနဲ့ မိန်းမဗိုက်ကြီးနဲ့တောင် မူးရမလားလို့ ဒေါသထွက်တဲ့ ကျနော့်ဘကြီး အဘကို ခေါင်းရိုက်တဲ့နေ့ အလွဲတွေ ခပ်များများနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အစိတ်လောက်တုန်းက လူ့လောကထဲ ရောက်လာတဲ့ နီတာရဲလေးက အမေပြောပြတဲ့ သူ့အကြောင်းကို ပြုံးစိစိနဲ့ ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ စာတွေစီလို့ပါ ။
at 9:23 PM 13 comments
( Image From wallcoo.net)
ဒီဇတ်လမ်းက တကယ်တော့ ရိုးရိုးလေးပါ ရိုးသားမှုတွေခင်းကျင်းထားတယ် အချစ်တွေနဲ့ အချိုးကျကျ ဖျော်စပ်ထားတဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်ရှိတယ် နားလည်မှုတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ လေထဲက အိမ်လေးတစ်လုံးရှိတယ် ချစ်သူနဲ့ တူတူ ဗိုက်ဆာရင် စာဖို့ ကြက်ဥပြုတ် ၂ လုံးရှိတယ် ။ အချစ်ဆိုတာ တကယ်တော့ အိပ်မက်ချို ပြင်းရှရှတစ်ခွက်သောက်လိုက်ရသလိုပါပဲ အိပ်မက်ထဲမှာတော့
ချစ်သူနဲ့ ပျော်လို့ ရွှင်လို့ အရာအားလုံးဟာလည်း ပြီးပြည့်စုံခြင်းတွေနဲ့ ရှတတဲ့ မာနတွေ ပြင်းရှ တဲ့ နားလည်မှု အလွဲတွေများပြားလာတဲ့ အခါမှာတော့ အိပ်မက်က လန့်နိုးရစမြဲပါပဲ နောက်ဆုံးတော့ အိပ်မက်ဟာလည်း ရေရေရာရာ ပြစရာဘာမှမရှိတဲ့ ဗလာသက်သက် ဗလာတစ်ခုပါပဲ ။
“ “မောင် ” ကြိုက်တာ အပြာရောင်လေ အစိမ်းရောင်ကို မုန်းမှန်းသိရဲ့သားနဲ့ အိပ်ယာခင်းတစ်ခုလုံး အစိမ်းရောင်တွေ ပြောင်းပစ်လိုက်တာတော့ ဒါ မောင့်ကို သက်သက်စော်ကားတာပဲ ” ” ဒါက ကိုယ့်ဘက်က မှားယွင်းမှုရဲ့ အစ ။ “ ဒီနေ့ဟာ ကိုယ့်ချစ်သူ တစ်ယောက်လုံးရဲ့ မွေးနေ့မှန်းမသိရလောက်အောင်ကို မောင် က မေ့တတ်နေပြီပေါ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ချစ်တဲ့သူအတွက် အရာရာကို အမြဲအမှတ်တရ ရှိနေတတ်တယ် မောင် အေး ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပေးသလောက်ရဲ့ ၁၀ ပုံ ၁ ပုံလောက်တောင်မှ ပြန်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီပြသနာရဲ့ အဖြေကိုတော့ မောင် နဲ့ ရှင်းဖို့လိုတယ်” ။ ဒါက ချစ်သူရဲ့ မယုံသကာင်္မှု နဲ့ နားလည်မှုလွဲမှားခြင်း က အလယ် ။
အချစ်ဟာ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ ကြိုးထုံးတစ်ခုဆိုရင် ဒီကြိုးထုံးကို ရှင်းဖို့ကြိုးစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ၂ ယောက်စလုံးပါ။ အခုမှ မောင့်ကို ချစ်ရတာ မီးတစ်စကိုဆုပ်ကိုင်ထားရသလိုပဲလို့ ပြောလာတဲ့ အခါမှာတော့ မာနတွေလည်း ဦးမော့လာရပြန်ပေါ့ ။ ညဦးဆို ဗိုက်ဆာတတ်တဲ့ ကိုယ့်အတွက် သူ မနေ့ညက ကိုယ်သိပ်ကြိုက်တဲ့ မားမားပြုတ်တစ်ပန်းကန် ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ် ငရုပ်သီးစိမ်းတောင့်တွေ လှီထည့်ထားလိုက်တာ ဘယ်သိလိမ့်မတုန်း အချစ်ဆိုတာ ငရုပ်သီးစိမ်းလိုပါပဲ စားလိုက်မိရင် စပ်တယ် “ ဒါ ခင်ဗျား ကျနော့်ကို သတ်နေတာပဲ ” ဂွတ်နိုက်စ်လို့ မနှုတ်ဆက်ဖြစ်ပဲ ဒေါသစကားနဲ့ အဲ့ညကို နိဂုံးချုပ်လိုက်တယ် ။ သူနဲ့ ကိုယ် ဆင်တူကိုင်တဲ့ ဖုန်း ၊ ဖုန်းမှာ ဆွဲထားတဲ့ ချိတ်ကလေးကလည်း ဆင်တူ ကိုယ့်ကအပြာရောင် ချိတ်ကလေး သူကတော့ အစိမ်းရောင် ကမန်းကတန်းနဲ့ အလုပ်သွားတုန်း သူ့ဖုန်းကို ယူလာမိတဲ့ကိုယ် Miss called တွေ များလှကြီလား နံပါတ်ကတော့ ကိုယ်မသိတဲ့ နံပါတ်စိမ်း ဘာတဲ့ Heart > Half ဆိုပါလား။ဒါကတော့ သူ့ကို ယုံကြည်မှု မရှိနိုင်တော့တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ခွင့်လွှတ်နိုင်မှုတွေက သူနဲ့ ကိုယ့်အတွက် အဆုံးသတ် ။
ဒီည အချစ်ကို နောက်ဆုံးဖွင့်ဆိုလိုက်တဲ့ ကိုယ် အချစ်နဲ့ တူတဲ့ ချိုပေါ့တစ်ခွက်ကို အကြာကြီးစွဲသောက်ပစ်လိုက်တယ် အချစ်က အစပိုင်းတော့ချိုမလိုနဲ့ နောက်ဆုံးကျ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်နိုင်သွားတဲ့ ချိုပေါ့တစ်ခွက်နဲ့တူပါတယ်။လမ်းခွဲမယ် ပြောတော့ သူက တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ပြုံးနေတယ် ခွင့်လွှတ်ပြုံးလား နားလည်ပေးတဲ့ အပြုံးလား လွတ်မြောက်မှုတစ်ခုအတွက် ဂုဏ်ယူအပြုံလား သူ ပြုံးတော့ ပြုံးနေတယ် ဘာကြောင့်ပြုံးတယ် ဘာအတွက် ပြုံးတယ်ဆိုတာ ကိုယ်မသိပါ ။ အချစ်မှာ ရိုးသားမှု နဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ ရှိသင့်တယ်ဆိုရင် သူက ရိုးသားတာလား ကိုယ်က ယုံကြည်မှုနည်းတာလား စဉ်းစားမရပါ ။ အိပ်ယာဝင်တော့ သူမရှိတော့တဲ့ အိပ်ခန်းက ခြောက်ကပ်ကပ် ထူးခြားနေတာက ကိုယ့်အိပ်ခင်းတွေ အားလုံး အပြာရောင်တွေဖြစ်လို့ပါလား ။
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဆိုတာ နက်ရှိုင်းလှတဲ့ မြစ်တစ်စင်းပေါ့ မှန်းဆရခက်လှတဲ့ ခပ်နက်နက်မြစ်တစ်စင်းပါ ။ ဒီနေ့မှစ ကိုယ် ဘယ်တော့မှ မြစ်ကမ်းနဘေးမထိုင်တော့ပါ ။
at 1:57 AM 16 comments
တစ်ခါမှ မကျွေးဖူးတဲ့ ကျနော် ဘာမှမရှိပေမယ့် အပေါင်းသင်း ရောင်းရင်းတို့အတွက် အားနာတာနဲ့ စာမရေးနိုင်သေးတော့ မျက်နှာချိုသွေးရင် ကိုယ်တိုင်ဖျော်ထားတဲ့ ဇီိးနို့ဖျော်ရည်လေးရယ် ရှိတဲ့ မုန့်လေးပဲတင်လိုက်တော့တယ်ဗျး) စားသွားကြပါအုံး သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုလည်း ဖိတ်ပါတယ် ချမ်သာသမျှက ကနည်းတော့ ဆိုင်ကြီးတွေမှာတော့ မကျွေနိူုင်သေးဘူးဗျ ဒါလေးပဲ စားထားနှင့်ပါ ။ နောက်တော့ ဆိုင်ကြီးကြီးမှာ ကိုယ့်ပါသာစားရင် သူငယ်ချင်းတွေကို သွားရည်ကျခိုင်းအုံးမယ် ။
စိတ်ရှုပ်တဲ့အခါ ကျနော်ဘာတွေလုပ်တယ်ထင်ပါသလဲ ??? :) ဆံပင်တွေဆေးဆိုး နားတွေဖေါက် လိုက်လားမလိုက်လားမသိ တွေ့ရာတွေကောက်ဝတ်ထည့်လိုက်တာပဲ ။ ခုရက်ပိုင်းဆို ပိုဆိုး တွေ့သမျှလူကိုလိုက်နောက်ချင်နေတာ ဖေ့ဘွတ်မှာဆို ပေါက်ကရမက်ဆေ့တွေလိုက်ရိုက်ထည့်နေတာပဲ ။စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ အွန်လိုင်းဝင်ပြီး ပြောချင်တာတွေ လိုက်ပြောနေတာ ဟိုမေပယ်လ်ကုလားစုတ်လေးက ဆြာကြီးလုပ်ပြီး ကိုယ့်ကိုဟောက်ထည့်သွားတယ် ။ ဘာလုပ်လုပ် အဆင်မပြေတော့ မနေ့က ဆံပင်တွေ ဆေးသွားဆိုးလိုက်တယ် မကြိုက်တဲ့သူတွေများတယ် အမေကလည်းမကြိုက် အမေသာ သိရင်တော့ နေပူထဲထွက်လို့လား အုန်းဆီမလိမ်းဘူးလားလို့ မေးတော့မှာ ။
ဆံပင်ဆေးရောင်က အတောက်ကြီးတော့လည်းမလုပ်ရဲတော့ နည်းနည်းအရောင်မှိန်တာလေး နာပေါက်ဖောက်ပြီး နားကပ်တပ်ထားတာ နားက ခဲဆွဲထားသလိုကြီးဖြစ်လို့ ဖြုတ်လိုက်တယ် ခုတော့ ဖောက်ထားတဲ့နားဖက် စောင်းမအိပ်ရဲ နာလို့ လှချင်တော့လည်း ခံပေါ့ ။ အစစ်မ၀တ်နိုင်တော့ ဖန်စီတွေလိုက်ဝယ်တယ် ဈေးတော်လို့ 19 ဘတ် ကြိုက်တာယူ ဆွဲကြိုးတစ်ကုံး လက်စွပ်တစ်ကွင်းဝယ်လိုက်တယ် ။အရင်က ဆံပင်နားထိုးတာနဲ့ မနေတတ်လို့ ခဏခဏညှပ်ပေမယ့် ခုတော့ မညှပ်ချင်တော့ဘူး ဈေးကြီးတာလည်းပါတယ် ။ နှုတ်ခမ်းမွှေးတော့ မြင်မကောင်းလို့ ရိတ်ရတယ် မဟုတ်ရင် လူကြမ်းကြီးနဲ့တူလို့ ။ ဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဆံပင်ညှပ်တဲ့အကြောင်းရေးပါလားတဲ့ ဘာရေးရမှန်းမသိလို့ ဆံပင်မညှပ်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း နဲ့ စိတ်ရူးပေါက်တဲ့ အချိန် ပေါက်ကရတွေလိုက်လုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရေးလိုက်တာ ။ တော်ပြီး ခဏဖတ်တဲ့သူတွေပါ စိတ်ညစ်ကုန်အုံးမယ်း)
ဒီတစ်ခါ ကြောင်ပြုံးလည်း မပြုံးဘူး ငါးခူပြုံးလည်းမပြုံးဘူး ခပ်မိုက်မိုက်ပဲကြည့်လိုက်မယ် သဘောပေါက်ရင် ပိုက်ဆံချေးပါ :P
ဆရာကြီးနတ်နွယ်ရဲ့ သာသာပြန်စာအုပ်တစ်အုပ် စာအုပ်ရဲ့ အကျဉ်းချုံးကိုတော့ အထက်ပါ စာပိုဒ်လေးနဲ့ဖော်ပြထားတယ် ။ ခေါင်းစဉ်ကကြမ်းတယ် ဒါပေမယ့် စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ ဆရာကြီးရဲ့ ဘာသာပြန်နိုင်မှု စွမ်းရည်နဲ့ ဒီစာအုပ်ရဲ့ မူရင်းစာရေးသူရဲ့ လိုတိုရှင်း နားလည်ရလွယ်တဲ့ စာကြောင်းတွေကို သဘောကျတယ် ။ မိခင် တစ်ယောက်ရဲ့ သမီးအပေါ်ထားရှိမှု အပ်ချုပ်သည် မိခင်ကို စာနာနားလည်တဲ့ သမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက် ပြည့်တန်ဆာမ ဖြစ်မှန်းမသိ တစ်စစ ပြောင်းလဲသွားရတဲ့ သူမရဲ့ ဘ၀ ပြီးတော့ အချစ် နဲ့တွေ့တော့ သူမရဲ့ပြောင်းလဲသွားရတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေ အားလုံးနဲ့ ဇတ်ကောင်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ စရိုက်တွေက ဒီစာအုပ်ရဲ့ ဆွဲဆောင်အားပဲထင်ပါတယ်။
အက်ဒီယာနာ လို့ခေါ်တဲ့ ရောမက မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက် မိခင်ရဲ့ အဆင်မပြေမှုကြောင့် ကိုယ်ဟန်ပြမယ် အလုပ် ကနေ ဒီဇတ်လမ်းကို အစပြုထားပါတယ် ။သူမရဲ့ အလှကိုတော့ ““ သွယ်ဝန်းသောမျက်နှာ ၊ ရည်ရွှန်းသော မျက်လုံး ၊ ဖြောင့်တန်းသောနှာတံ ၊ နီမြန်းသော နှုတ်ခမ်း ၊ စီရီဖြူဖွေးသော သွားတို့ဖြစ်သည် ””” လို့ စာရေးဆရာက ဖော်ကျူးထားပါတယ် ။ ကိုယ်ဟန်ပြမယ် လုပ်ရာကနေ ဂျီဆယ်လာဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းမ တစ်ယောက် အဲ့သူငယ်ချင်းမက ငွေကိုအလွယ်ပေါက်နဲ့ ရှာတဲ့သူ သူမကိုလည်း မသိမသာတစ်မျိုး သိသိသာသာတစ်မျိုး ယောက်ျားပေါင်းများစွာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ် ။ သူမဟာ ဘယ်လိုပဲ ကိုယ်ဟန်ပြမယ် အလုပ်ကိုလုပ်နေရပါစေ ပျက်စီးရာ လမ်းကြောင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပေမယ့် သူမ အမှန်တကယ် အလိုရှိတာကတော့ သာယာပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုတစ်ခုရဲ့ မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ကိုလိုချင်တာပါတဲ့ ။
ဒရိုင်ဘာတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်တော့ သူမရဲ့ ဘ၀ဟာ ပျက်စီး၇ာလမ်းကြောင်းရဲ့ အစလို့မြင်ပါတယ် ဒီနေရာမှာ မူရင်း စာရေးဆရာက ဘယ်လိုရေးထားမှန်းမသိပေမယ့် ဆရာကြီးနတ်နွယ်ရဲ့ ဘာသာပြန်ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ မြန်မာလိုလည်း မရိုင်းရလေအောင် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ကျနော်သတိထားမိတဲ့နေရာလေးကတော့ သူမရဲ့ ချစ်သူက သူ့သခင်မရဲ့ ကြွယ်ဝချမ်းသာပုံကို လိုက်ပြနေတဲ့ အချိန် မိန်းမသားပီပီ မနာလိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာတုန်း ခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောလိုက်တဲ့ စကားက ““ တော်စမ်းပါရှင် ၊ ကျမတို့ဒီကိုလာကြတာဟာ ဒီအ်ိမ်ကြီးနဲ့ ရှင့်သခင်မရဲ့ အ၀တ်တွေကိုသွားရည်ကျဖို့မဟုတ်ဘူး ရှင့်အခန်းမှာ ချစ်တင်းနှောကြဖို့ ကဲ..ဒီတော့ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ကြဖို့ပဲရှိတယ်မဟုတ်လား” တဲ့ ။
အချစ်ကြမ်းပြီး နုနုညံ့ညံ့မရှိတဲ့ လူသတ်သမား ဆွန်ဇော်နို အချစ်ကို အကြမ်းနည်းနဲ့ အမြဲယူလေ့ရှိတဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်ဇတ်ကောင် ။ သူမရဲ့ အလှမှာ ယစ်မူးသွားတဲ့ အရာရာ ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်တဲ့ လုံခြုံရေးအရာရှိ အက်စတာရီတာ ဒရိုင်ဘာ ဂျီနို ရဲ့ အောက်တန်းကျမှုတွေကို သိရှိသွားပြီးတဲ့နောက် အချစ်တွေသေဆုံး ဘ၀ကိုအမှောင်လောက ထဲမှာသာ ကျင်လည်လာခဲ့တဲ့ အက်ဒရီယာနာ ဂျီဟာကိုမို လို့ ခေါ်တဲ့ မြေအောက်တော်လှန်ရေးသမား လူချောလေးနဲ့တွေ့တဲ့နောက် ပေးဆပ်ခြင်းသက်သက်နဲ့ အချစ်တွေ တဖန်မွေးဖွားလာပြန်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ။
ဇတ်ကောင် ၅ ဦးရဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆက်စပ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အရှုပ်ထွေးကြားမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဇတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ ။ နောက်ဆုံးသော သူမမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိလာတော့ ဘယ်သူကမှမသိပေမယ့် စိတ်နာနာနဲ့သူမသိလိုက်တာက သူမရဲ့ကိုယ်ဝန်ဟာ လူသတ်ကောင်တစ်ယောက်နဲ့ ရမှန်းသိလိုက်တဲ့ အချိန် ။ ““ မိန်းမတစ်ယောက်သည် ဘယ်လောက်ပင်ဆင်းရဲပါစေ အခြေနေတွေဆိုးဝါးနေပါစေ အနာဂါတ်သည် အဘယ်မျှပင် မရေမရာရှိပါစေ သူမသည် ခလေးငယ်တစ်ဦးမွေးဖွားရမည့် အတွက် ၀မ်းမသာပဲမနေနိုင်ပါ ” တဲ့ မိခင်းတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက် ။
သူမချစ်တဲ့ မောင့်ကို အနစ်နာခံပေးဆပ်မှုနဲ့ ချစ်သူကောင်းပီသ ပုံကိုတော့ “““ မောင့်ဘ၀ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရှိနေမယ်ဆိုရင် မောင့်ကို မတွေ့မမြင်ရတော့ရင်လည်း အရေးမကြီးပါဘူး အလုပ်တစ်ခုခု လုပ်ပြီး မောင်တို့လူတန်းစားထဲက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ပါမောင်ရယ် မောင့်ကိုကျမ တကယ်ပဲချစ်ပါတယ် ။ ကျမနေရာမှာ တခြားမိန်းခလေးတစ်ယောက်ဆိုရင် မောင်နဲ့ခွဲဖို့အကြောင်းတွေ ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် မောင် အခြေနေက လိုအပ်လာပြီဆိုရင်တော့ လမ်းခွဲကြရမှာပေါ့ ။ မောင့် အနေနဲ့ မလိုအပ်တော့ဘူးလို့ ယူဆရင် ကျမတို့နောက်ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘဲနေကြတာပေါ့ ကျမကတော့ မောင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရှိနေတယ်ဆိုရင်ပဲ.........”””” လို့ ချစ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ နားလည်ပေးနိုင်မှုကို မြင်သာအောင်ပြထားပါတယ် ။ဒီချစ်သူကပဲ သူ့ရဲ့ သေတမ်းစာမှာ သူမအတွက် အမွေတွေ အများကြီး ပေးခဲ့ပါတယ် ။
ဘယ်လိုပင် ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရပါစေ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့စိတ်နဲ့ လောကကြီးကို ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ သူမရဲ့စိတ်ထားက လေးစားစရာပါ စာအုပ်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မလိုက်အောင်ကို သူမရဲ့ စိတ်ထားတွေ အနစ်နာခံမှုတွေက ဖော်ပြနေပါတယ် ။ အဆုံးသတ်ကိုတော့ ““ လူသတ်ကောင်နှင့်ပြည့်တန်ဆာမ ညားပြီး မွေးဖွားလာတဲ့ ခလေးငယ်တစ်ယောက် ဒီလောကကြီးထဲတွင် အဘယ်သို့သော လူတစ်ယောက်အဖြစ် တည်ရှိလာချေမည်နည်း အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သူမရဲ့ကိုယ်ကို ငွေကြေးဖြင့် ဖလှယ်ခဲ့ရပေသည် ” တဲ့ သူမရဲ့ ဘ၀ကို သူမရဲ့ မိခင် သူမရဲ့ ခလေးကိုတော့ ယောက်ျားကလေးဖြစ်ခဲ့ရင် ဂျီဟာကိုမို လို့ အမည်ပေးပြီး မိန်းခလေးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ “လက်တီရှာ” (ရွှင်ကြည်နုး) လို့ မှည့်တွင်မည့်အကြောင်းတွေးရင်း အဆုံးသတ်ထားပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီး သူမဟာ ရောမက မိန်းမပျက် ဆိုတာထက် ရောမက မိန်းမသူရဲကောင်း တစ်ယောက်လိုမြင်ပါတယ် ။ စာဖတ်သိပ်မနာသေးတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ စာအုပ်ဖတ်ပြီးဝေဖန်တဲ့ အမြင်လေးပါ အမှားတွေရှိနိုင်ပါသေးတယ် တချို့တွေ ကျနော့်ထပ် အများကြီးစာတွေဖတ်ဖြစ်မယ်ထင်ပါသေးတယ် အစားကောင်းစားရရင် သူငယ်ချင်းတွေကို သတိရသလို စာကောင်းလေးတွေဖတ်ဖြစ်ရင်လည်း မျှဝေပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေ ။ ဖတ်ပေးသွားသူများ အားလုံးကျေးဇူးပါ ။
အချိန်က ည ၉နာရီ ကျော်ကျော် နယ်မြို့လေးတစ်မြို့ရဲ့ အင်္ဂါရပ်နဲ့အညီ လူရှင်းနေပါပြီး ။ အဲ့ဒီညက အိမ်ကလေးမှာ ငိုသံတွေ ရယ်သံတွေ ပျောက်ဆုံးနေတယ် ။
“ ပစ္စည်းတွေ ကျန်မယ်နော် ခလေး နင် ဘာယူသွားအုံးမလဲ ”
“ဟင်အင်း...တော်ပြီးနေပါစေတော့ ” အငယ်လေးတွေက သူ့ ကိုကြည့်နေတယ် ဒီနေ့ အိမ်ကလေးမှာ ထူးဆန်းနေတယ်ဆိုတာကို သူတို့ လည်းသိကြတယ်ထင် တယ်။ လူကြီးတွေကတော့ ၀မ်းနည်းစိုးရိမ် တဲ့ မျက်နှာတွေနဲ့ ပေါ့ ။တစ်ခါခါ မိုးတွေ ရွာတက်တဲ့ ပူပြင်းတဲ့မေလထဲမှာပါ ဘုရားဦးသုံးကြိမ်ချ ပြီးတော့ အဖေ နဲ့အမေ့ကို ကန်တော့တယ် ။ ဟန်မပျက်ပဲ ဆုပေးနေတာက အဖေ အသံမထွက်ပဲ မျက်လုံးတွေနဲ့ပဲစကားပြောနေတဲ့ အမေ ။
“သား ...ကားသွားစောင့်တော့မယ် လိုက်မပို့ ကြနဲ့ တော့ ”
အမေက အိမ်နောက်ဖေးထွက်သွားတယ် သူသိတာပေါ့ ကြိတ်ငိုနေမယ်ဆိုတာ ဆိုနင့်နေတဲ့ ရင်ထဲမှာ မျှော်လင့်ချက်တွေ အားမာန်တွေ ရည်ရွယ်ချက် တွေ စုထားတဲ့ အထုတ်ကြီးကြီးတစ်ထုတ် မလှည့်ကြည့်ဘူးး ခြေလှမ်းတွေကို ရပ်တန့် စေနိုင်တဲ့ မျက်ဝန်းတွေကို ရင်မဆိုင်ရဲလို့ ပါ။
လမ်းမှာ အိပ်ငိုက်မှာစိုးလို့ကော်င်္ဖီခါးခါးတစ်ခွက် သောက်လိုက်တယ် ရှေ့ဆက်ဖို့ အတွက် ခါးသက်မှုတွေရဲ့ အရိပ်ယောင်တွေကို ကော်ဖီခါးခါးက ဘာသာဗေဒတစ်ခုနဲ့ပြောပြလိုက်တာပါ။ ကွာတာဘောင်းဘီတိုလေး နဲ့ ကိုဝတ် စာရွက်အပိုင်းစလေးတစ်ခု ၁၂ နှစ်နီးပါးဒုက္ခတွေနဲ့ရင်းထားရတဲ့ စာရွက်လေးပေါ့ ပြီးတော့ ၅ စုံလောက်ထည့်ထားတဲ့ ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးကို ထမ်းပြီး စွန့် စားခန်းထွက်ခဲ့တာ ကြောက်တယ် ဘာကိုလဲမသိ ။တစ်ယောက်တည်းနဲ့တစ်ခါမှမရောက်ဖူးတဲ့အရပ်ဒေသကိုမျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်သဲ့သဲ့လေးနဲ့စွန့်စားခန်းတစ်ခု ဘယ်သူက သူရဲကောင်းဖြစ်မလဲဆိုတာ မသိသေးပါဘူးး။ အသက်ကလေးက ၂၀ စွန်းစ လူကြီးစိတ်နဲ့ခလေးကိုယ် ယောင်ဝါးဝါးနဲ့ ဆန်အိတ်တစ်အိတ်ကိုတောင်မ မနိုင်သေးတဲ့ သူ ။
မမြင်ဖူးတာတွေ မြင်ရ မစားဖူးတာတွေ စားရ တစ်ခါမှ မကိုင်ဖူးတဲ့အသပြာအနည်းငယ်ကို ရွှေတုံးကြီးကောက်ရသလို ပျော်နေလိုက်တာ ။ ဒီတစ်လစာ အမေ ဖွားလေးမြ ဆီက ချေးထားတဲ့ အတိုးနဲ့ ပိုက်ဆံလေးဆပ်ဖို့ငါပို့ လိုက်အုံးမှပဲ တစ်ဆယ်တိုးတောင်ဆိုတော့ မသက်သာဘူး အမေ၀မ်းသာနေမှာ ။ နောက်တစ်လ အစ်ကိုသူများကို ရိုက်လိုက်ပြန်ပြီး လျှောရအုံးမယ် “လူကြုံလာရင် ၀င်လာခိုင်းလိုက် အမေ ” အားနာတဲ့အသံနဲ့အမေက “ အေး ငါ့သား ” တဲ့ ။ အ၀တ်စားတွေထပ်လာတော့ အလုပ်နားတာနဲ့လျှော် ချွေစောနံ့ နေပြီး “ ဒါပဲ ..ရှိတာလား” ဆိုတဲ့ ခနဲ့ တဲ့စကားတွေကို မြေမြှုပ်ခဲ့တဲ့ မာနတွေက မော်မကြည့်ရဲခဲ့ဘူး ။ ဗိုက်ဆာတယ် ဟင်းလည်းမရှ်ိ မေ့နေလိုက်တာ မြေပဲနဲ့ငါးပိရည်စပ်စပ်လေးနယ်စားလိုက်လည်းဖြစ်တာပဲ ရွာမှာတုန်းကလည်း ဒီလိုပဲစားခဲ့တာပဲ အားလုံးကိုမေ့ အစာအိမ်ကိုအားဖြည့်လိုက်တယ် ။
ဒီလတော့ အ၀တ်စားလေးတစ်စုံလောက်ဝယ်မှပဲ ပါလာတာလေးတွေလည်းတော်တော်ဟောင်းနေပြီး ။ ကြည့်ပဲကြည့်ခဲ့ရတဲ့ကြွရွနေတဲ့ ကွပ်စိပ်အင်္ကျီလေးတွေ အကောင်းစားတံဆိပ် ဘောင်ဘီးတွေ ပိုက်ဆံပြန်တွက်ကြည့်တော့ ဘုရားတရတဲ့အဖြစ် တော်ပါပြီလေ ရှိတာလေးနဲ့ပဲလှအောင်ဝတ်တော့မယ် တစ်ရာဖိုး ၃ ထည်ရတဲ့ ဘောင်ဘီတွေ ပြီးတော့ အဖြူရောင်ရှပ်ကလေးတွေ စွန့်စားပြီးဝယ်လိုက်တယ် ။အော်ခံရတာလား အော်ပါစေပေါ့ သူအာညောင်းရင် တိတ်သွားလိမ့်မယ် ။ မနာလိုတဲ့သူတွေများတာလား မသိဟန်ဆောင်လိုက်တယ် ထမင်းရှင်ကြည်ဖြူရင်တော်ပြီး ကျန်တာတွေ ခေါင်းထဲမထည့်တော့ဘူးး။ ကျော်ခွခဲ့တဲ့ ချိုက်ခွက်တွေ အများကြီး အပ်ထိုးခံရသလို နာလှတဲ့ စကားတွေ အမျာကြီး ခုနေပြန်ပြော ပါးစပ်ရာဇ၀င်ထက် ဘာမှမပိုလာတော့ဘူး ။ဖျက်လတ်နေတယ် ခေါ်သံကြားတာနဲ့တက်ကြွနေတက်တယ် ။
ရက်တွေကို လစား လတွေကိုနှစ်စားလာတော့ ပြောင်းလဲသွားလိုက်တာ သူ့ ကိုယ်သူတောင်မသိတော့ဘူး မှန်ကြည့်လိုက်တိုင်း မျက်နှာသေနဲ့လူတစ်ယောက် ၊ ပြုံးလိုက်တိုင်း မပီပြင်တော့တဲ့ မဲ့ပြုံး၊ ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေမှာ ဖော်ရွေမှုတွေ မရှိတော့ဘူး ၀တ္တရားကြေ ပုံစံက မသင်ပဲနဲ့ တက်သွားတယ်။ တစ်ခွန်းပဲ ခေါ်ရတဲ့ ခေါ်သံတွေကို မလှုပ်တစ်လှုပ် သူက ၃ ခွန်းလောက်နေမှ ကြားသလိုလို မကြားသလိုလိုနဲ့အရွဲ့ တွေလည်းတိုက်တက်လာတယ် ။ ရက်ပေါင်း ၇၃၀ မှာ စီးခဲ့တဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံကိုလည်း ခဏခဏ လွှင့်ပစ်မိတယ် ။ဘယ်ဘက်လက်က ဖြစ်သင့်တဲ့ ရေပုံးထဲမှာလည်း ရေပါအောင်မခပ်ခဲ့တော့ဘူး ။ မာနတွေကို ထုတ်ပိုးဖို့ကျန်ကျောင်း ကျွတ်ကျွတ်အိတ် ကိုလည်း ဆွဲစုတ်ပစ်လိုက်တယ် မုန်းလွန်းလို့။သွားစမ်းပါ ခဏတော့ အားလုံးကို လွှင့်ပစ်တော့ မနေ့ ကလည်းမသိ မနက်ဖြန်ဆိုတာ မရှိပဲ ဒီနေ့ မှပဲ သူပျော်အောင် နေချင်တယ် သေတဲ့အထိနေလို့ ရရင်ပိုတောင်ကောင်းသေး။
မျှော်လင့်ချက်တွေ အားမာန်တွေ ရည်ရွယ်ချက် တွေ စုထားတဲ့ အထုတ်ကြီးကြီးတစ်ထုတ်အစား အခုတော့ အရှုံးတွေကိုရင်ဝယ်ပိုက် ၊ ပျက်စီးနေတဲ့အစာအိမ်တစ်ခုတည်း ကို မူးယစ်စေတဲ့ အရည်တွေ မြိုချပစ်လိုက်တယ်။ ထုံအအဖြစ်သွားတဲ့ ပုံစံနဲ့ ပေတေတေ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပေါ့ လုပ်တာတွေမဖြစ်တော့ ဖြစ်တာတွေ လုပ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပဲ ။တစ်ချို့ တွေက ပြန်ထစမ်းပါဆိုပြီး လက်ကမ်းကြတယ် ၊ စကားတွေနဲ့အားဆေးတွေတိုက်ကြတယ် ၊ တစ်ချို့က လူနာသတင်းမေးသလို
ဟန်ဆောင်ခြင်းအနုပညာတွေနဲ့။ ဒီနေရာ လမ်းခွဲလေးက ပျော်ခဲ့ရတဲ့ အပေါင်းသင်းတွေနဲ့ထိုင်ခဲ့တဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးဆီ အခွင့်ကြုံရင်လာပြန်ထိုင်ပြီး စကားတွေတစ်ဝကြီးပြောတာပေါ့ ခုတော့ လမ်းခွဲလေးကိုရောက်တော့မှာမို့အိပ်စက်အနားယူဖို့ အရိပ်ကောင်းကောင်းတစ်ခုကို ရှာလိုက်အုံးမယ် ။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးက အမှတ်တရတွေကို ရင်ဘတ်ထဲ ထည့်သွားတယ် လေးသလားဆိုတော့ မပြောပါရစေနဲ့ တဲ့ ။
ညီလေးဘာလုပ်သင့်လဲ ဘာသင်တန်းတွေတက်သင့်သလဲ ဟုတ်လား ငါ့ညီ။
ဒါဆို ပထမဆုံးအစ်ကို မေးချင်တဲ့မေးခွန်းက ညီလေး ဘာလုပ်ချင်တာလဲ။ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာတဲ့လဲ…..
ပထမဆုံး ညီလေးဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒကို အရင်ကြည့်ပါ။ စိတ်ပါဝင်စားတဲ့အရာကို လုပ်ကိုင်နေရရင် အဲ့ဒီလူရဲ့ ဘ၀မှာ ပိုအောင်မြင်စေတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ပျော်ရွှင်မှုဟာ လူ့ဘ၀ပတ်ဝန်းကျင်ကို အများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်။ အစ်ကိုကတော့ ညီလေးပျော်တာပဲမြင်ချင်တယ်။
ပြီးတော့မှ့ ရလာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ပထမဆုံး သင်တန်းတွေကိုလေ့လာပါ။ Marketing တွေ အရမ်းထွန်းကားတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ကြော်အောင်ငြာတဲ့ သင်တန်းတွေကို အတုအစစ် ခွဲခြားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကုန်ဆုံးသွားမယ့် ငွေကြေးတွေထက် ဘယ်လိုမှ ပြန်လည် အစားထိုးမရနိုင်တာ အချိန်ပါ။
ပညာရေးဆိုလို့ အခုတွေ့လာရတဲ့ ပညာရေးတွေအတွက် အစ်ကိုတကယ်ကို စိတ်လေးမိတယ်။ ငယ်ဆရာတွေနဲ့ပြန်တွေ့တော့ ငယ်ဆရာတွေဆီက ငြီးငြူသံတွေက တကယ့်ကို အားလျော့စေခဲ့တယ်။
တက္ကသိုလ်ဆရာမဖြစ်သွားတဲ့ ဆရာမကတော့ ကျောင်းသားတွေ အတန်းတက်တာ စာလာသင်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ စာကိုရယူလိုတဲ့ စိတ်တွေ စာသင်ခန်းထဲမှာ ရှာမတွေ့တော့ သူအရမ်းစိတ်ပျက်မိတယ်။ အစ်ကိုနဲ့တွေ့တဲ့နေ့က ဆရာမ ထွက်စာတင်လာတဲ့နေ့တဲ့။ မိအိုဖအိုတွေနဲ့ နေ,နေရတဲ့ ဆရာမအတွက် မိသားစုကို ပေးရတဲ့အချိန်ထက် ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဗာဟီရအလုပ်တွေ လုပ်နေရတာများလွန်းတာမို့ ဘယ်လိုမှ ရှေ့မဆက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့လေ။ ဆရာကောင်းတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မဟုတ်ပါဘူး။
ပြင်ပကျူရှင်တွေသင်နေတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ကတော့ အခုခေတ်ကျောင်းသားတွေမှာ နှစ်မျိုးပဲရှိတော့သတဲ့။ အရမ်းတော်ပြီး ထိပ်ပိုင်းရောက်နေတဲ့သူတွေရယ် အောက်ခြေနားက လူတွေရယ်ပဲတဲ့။ အလယ်အလတ်မှာ ပုံမှန်လိုက်နိုင်တဲ့သူတွေ မရှိသလောက်ရှားနေခဲ့ပြီတဲ့လေ။ ဒါကိုရော ဘယ်သူတွေက အသေအချာလေ့လာပြီး အားလုံး သတိပြုမိအောင် မလုပ်သင့်ဖူးလား။
ဘော်ဒါဖွင့်ထားတဲ့ အစ်ကိုဆရာလင်မယားကတော့ ၀ါသနာကိုအဓိကထားတာမို့သာ ဆက်ဖွင့်ထားမိတယ်။ မဟုတ်လို့ကတော့ ပိတ်ပစ်တာကြာခဲ့ပြီတဲ့။ တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့အညီ ဆရာ ဆရာမတွေ ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာ ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်တွေရဲ့ ဖြူစင်တဲ့ အမူအကျင့်တွေတဲ့။ ကျောင်းခန်းထဲရောက်တာနဲ့ တူညီဝတ်စုံဝတ်ပြီး အားလုံးက တညီတည်းဖြစ်ရမှာထက် မိဘအရှိန်အ၀ါတွေနဲ့ ဆရာတွေကိုပါ မောက်မာမော်ကြွားနေခဲ့ကြပြီတဲ့လေ။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ညီငယ်တယောက်ကိုမေးမိတော့လည်း ကျောင်းကိုသွားတာ roll call ပြည့်အောင်လို့တဲ့။ စာကတော့ အနီးကပ်မှဆိုလား ဘယ်နှစ်ပုလင်းဆိုလား ပေးလိုက်ရင် တစ်တန်းအောင်ဖို့ အလွယ်သား။ အတန်းအလိုက်သူ့ဈေးနှုန်းနဲ့ ကပ်ထားပြီးသားဆိုတော့ နောက်ဆို city mart မှာများ ၀ယ်လို့ရနိုင်လောက်တယ်ထင်တယ်။
ကျောင်းပြီးရင်ကောဆိုတဲ့ ဘ၀အာမခံချက်တွေ မပေးနိုင်တော့တာ ကြာပြီပဲ။ ဘွဲ့တွေရပြီးရင် မွမ်းမံသင်တန်းတွေက ဆက်လက်ချီတက်ရဦးမယ်။ ငွေကြေးမတတ်နိုင်သူတွေက တခန်းရပ်ဘွဲ့လက်မှတ်လေးတွေကိုင်ပြီး မှီတဲ့ပန်းတွေကိုလှမ်းပေါ့။ တုံးခုနိုင်တဲ့သူတွေကလည်း ခုပေါ့။
သင်ကြားခြင်းဆိုတဲ့ စာသင်ခန်းတွေထဲမှာ ကိုယ်တိုင်လေ့လာ သင်ယူခြင်းဆိုတာကိုလည်း ထည့်ထားပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ညီလေးကိုယ်တိုင် ရှာဖွေလေ့လာဖို့လိုတယ်ဆိုတာ အရင်ကသင်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာအုပ်ကိုကျော်၍ မြင်နိုင်စွမ်းကို ဆောင်ရသည်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့အညီ မမေ့မလျော့ မှတ်သားလိုက်နာပါကွာ။
ကဲ ညီငယ် အစ်ကိုပြောချင်တာတွေတော့ ပြောပြီးပြီ။
ဘ၀တိုးတက်ဖို့အတွက် မှန်ကန်ဖြောင့်မှတ်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ပါစေကွာ.
P>S = ကျနော့်အတွက် အစ်ကို့ရဲ့ ပေးစာလေးပါ ဒီစာလေးအတွက် အစ်ကို့ကိုကျေးဇူးပါ ဒီထက်ကောင်းမယ့် စကားလုံးရှိရင်ပြောချင်ပါသေးတယ် ฟทกืห่ด้
နန်းဆန်တဲ့ တော်ဝင် သဇင် မဖြစ်ရင်နေပါစေ
မာယာ ကင်းပြီး မွှေးကြူတဲ့ခရေ ပန်းလေးဆို
ပီကင်းက ဘဲကင် နဲ့ ကြေးအိုး
ဆိုးလ် က ရေခဲမုန့် နဲ့ပဲခေါက်ဆွဲ
ဘရာဇီး က အရမ်းကောင်တဲ့ ကော်ဖီ တွေ မလိုပါဘူးးး
မင်းလေး ချက်ကျွေး မဲ့ ပဲဟင်းပျစ်ပျစ်လေးနဲ့ 
ငါးကြော် နောက်ပြီး ရေနွေးချမ်း ဖန်ဖန် ခါးခါး လေးဆို
တို့ တွေ အတွက် အဆင့်မြင့် ပန်းခြံတွေ သွား
အကောင်းစား စားသောင်ဖွယ်ရာတွေနဲ့အပန်ဖြေစရာ မလိုပါဘူး
လသာတဲ့ညတွေမှာ .အိမ်ရှေ့ ကခုံတန်းလေးမှာထိုင်
ကောင်းကင်က လမင်းကြီးကို ကြည့်မင်းလက်ကလေးကိုင်ပြီး
ချစ်စရာကြယ်လေးတွေ တစ်လုံးချင်း လျှောက်ရေတွက်ကာ
မင်းပြုတ်ကျွေးမယ့်ပြောင်ဖူး ပြုတ် ပူပူလေး စားရရင်
ကိုယ် နေမကောင်းဖြစ်တဲ့ အခါ
အရမ်းတော်တဲ့ပါရဂူတွေ ၊နာစ်တွေ မပြုစုရင် နေပါစေ
မင်းလေးရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ လက်ကလေးနဲ့ ကိုယ့် နဖူးလေးကိုစမ်း
မင်းလေးတိုက်မယ့် မင်္ဂလာငွေမောင်း ဖြစ်ဖြစ် ၊ ပန်ကာ အခိုးပွင့်ဆေးလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်
ကိုယ့် ဘ၀ သေဆို သေ ပျော်ပါပြီ ကလေး ရယ်
ကဗျာလို့ထင်ရတဲ့ ဒီစာစုလေးကို ဘလော့ဂါဖြစ်ကာစက သူများတွေကို အားကျပြီးရေးထားတာလေ ခုပြန်ဖတ်ရင်း ပြုံးစိစိ ဖြစ်နေတယ် အချစ်ကဗျာဆရာကြီးတွေ လက်မှိုင်ချလောက်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ပထမဆုံးကဗျာလေးမို့ :)
at 12:51 AM 8 comments